Inona no tokony hojerena amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana ny efitranon'ilay masinina fahalalana ho an'ny fikojakojana ny ascenseur
Ny ascenseur dia tena mahazatra tokoa amin'ny fiainantsika. Mila fikojakojana tsy tapaka ny ascenseur. Araka ny fantatsika rehetra, maro ny olona no tsy miraharaha ny fitandremana sasany amin'ny fikojakojana ny efitranon'ny masinina. Ny efitranon'ilay masinina dia misy toerana ijanonan'ny mpiasa fikojakojana matetika, ka ...
Inona avy ireo fepetra ho an'ny famolavolana haingon-trano sy ny escalator
Amin'izao fotoana izao dia tena ilaina tokoa ny firavaka haavo. Tsy ny fampiharana fotsiny, fa ny olana amin'ny hatsarana ihany koa. Ankehitriny dia avo kokoa sy avo kokoa ny gorodona, noho izany dia lasa manandanja kokoa ny ascenseur. Ireo rehetra ireo dia mila mandalo endrika, fitaovana ary ...
Ny andraikitry ny kodiarana fitarihana ascenseur
Fantatray fa ny fitaovana rehetra dia misy kojakoja samihafa. Mazava ho azy, tsy misy ankanavaka ny ascenseur. Ny fiaraha-miasa amin'ny kojakoja isan-karazany dia afaka mampandeha tsara ny ascenseur. Anisan'ireny, ny kodiarana fitarihana ny ascenseur dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny v ...
Tombony sy fatiantoka ny ascenseur tsy misy efitrano kely ary ny ascenseur an'ny milina
Ny ascenseur tsy misy efitrano milina dia mifandraika amin'ny ascenseur an'ny masinina, izany hoe ny fitaovana ao amin'ny efitranon'ny masinina dia kely indrindra araka izay azo atao raha mitazona ny zava-bita tany am-boalohany tamin'ny alàlan'ny teknolojia famokarana maoderina, manala ny efitranon'ny masinina, ...